DEBIAN Post Installation Guide 8/9 - 2016 - အပိုင်း ၁ | Linux မှ
Installation လမ်းညွှန် DEBIAN 8/9 - 2016 - အပိုင်း ၁
ဒီအခွင့်အလမ်းမှာငါတို့အားလုံးလုပ်နိုင်တဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဆင့်တွေအကြောင်းပြောကြမယ် GNU Linux DEBIAN ဖြန့်ချိမှုကို၎င်း၏ဗားရှင်း ၈ Jessie (Stable) သို့မဟုတ် 8 Stretch (Testing) တွင်ထည့်သွင်းပါ။, သို့မဟုတ်ပါကအပေါ်အခြေခံပြီးတ ဦး တည်း။
ထောက်ခံချက်: ဒီအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါ console message တွေကိုအသေအချာကြည့်ပြီးအထူးသဖြင့်ညွှန်ပြသူတွေကိုလက်ခံပါတယ် packages များဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည် ..."။
အဆင့် 0: ကန ဦး operating system နှင့်အမြစ် Terminal
အဆင့် ၁ - အခြေခံကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းမှုများကိုလုပ်ဆောင်ပါ
အဆင့် ၁.၁ ကွန်ရက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပါ
configuring Network မှ Manager ကို:
configuring Network ကို Interface:
မှတ်စု: နောက်ဆုံးလိုင်းကိုရှိလျှင်၎င်းမှမှတ်ချက်ပေးသည် Network မှ Manager ကို activated (စစ်မှန်တဲ့) ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် DHCP။ သငျသညျကို disable လုပ်လျှင်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မမှန်သော) သို့မဟုတ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး Network မှ Manager ကို.
မှတ်စု: မင်းရှိရင် Network မှ Manager ကို install လုပ်ပြီး activated စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် DHCP ဂရပ်ဖစ်ကနေတဆင့်။
အဆင့် ၁.၂ အဖွဲ့၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုပြုပြင်ပါ
- သင်၏ network parameters များကိုသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်အောက်ပါအကြောင်းအရာများကိုထည့်ပါ။ - NetworkManager မှထုတ်လုပ်သည် # your_domain.com nameserver 192.168.1.1 search
1.3 အဆင့် XNUMX System PROXY နှင့် WEB BROWSER တို့ကိုပြုပြင်ပါ
မှတ်စု: အကယ်၍ သင်၏ကွန်ပျူတာသည်အင်တာနက်ကို ၀ င်ရောက်ရန် Proxy (Transparent မဟုတ်) ဖြင့် Infrastructure ၌ရှိလျှင်ဤအဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
MENU အသုံးပြုသူ -> Control Panel - Button (SYSTEM PREFERENCES) NUT သင်္ကေတဖြင့် SCREWDRIVER ဖြင့် -> "NETWORK" ရွေးချယ်မှု -> "NETWORK PROXY" ရွေးစရာ -> လက်စွဲရွေးစရာ -> လိုအပ်သောအပြောင်းအလဲများကိုပြုလုပ်ပါ။
« ICEWEASEL »ကဲ့သို့« FIREFOX »ကိုအခြေခံသည့် Browser -> PREFERENCES -> ADVANCED -> ကွန်ယက် -> အလှဆင်ခြင်း -> လက်စွဲစာအုပ် PROXY CONFIGURATION
၁.၄ SOURCES.LIST ကိုအကောင်းမြင်ပါ
မှတ်စု: အကယ်၍ သင်သည်အလယ်အလတ်အဆင့်သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်သောဗဟုသုတရှိသူဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်သည် DEBIAN ဇာတိ repositories ၏လိုင်းအားလုံးကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောသို့မဟုတ်အခြေခံအသိပညာအသုံးပြုသူဖြစ်ပါက၊ တရားဝင် Repositories ၏ပထမလိုင်း ၃ ခုကိုသာအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။ အသိပညာ assimilating သွားပါ။ ဆိုလိုသည်မှာပိုင်လိုင်းများကိုမှတ်ချက်ပေးရန် "Jessie-backports" y "Deb-multimedia.org"တည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်။
မှတ်စု: Google Earth 32 Bit အတွက်သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်
အဆင့် ၂ - Console / Terminal တွင်ပြင်ဆင်ထားသော PROXY (ယာယီ)
မှတ်စု: သင့်တွင် proxy မရှိပါကသို့မဟုတ်သင်၏ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတွင်ပွင့်လင်းမြင်သာစွာပြင်ဆင်ထားပါကဤအဆင့်ကိုကျော်လိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ repositories သည် local (internal) ဖြစ်ပါက။
အဆင့် 3: System ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်
အဆင့် ၃.၁ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အခြေခံမွမ်းမံခြင်း
မှတ်ချက် ၂ - ဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာapt-get update / apt အသစ်ပြောင်းခြင်း»စနစ်ကသင့်ကိုပြောပြသည်
အီး: သော့ / ပိတ် / ပိတ် / ပိတ် / မဖွင့်နိုင် (11: အရင်းအမြစ်ခေတ္တမရရှိနိုင်),
E: admin လမ်းညွှန် (/ var / lib / dpkg /) ကိုသော့ခတ်။ မရပါ။ ၎င်းကိုအသုံးပြုသောအခြားလုပ်ငန်းစဉ်အချို့ရှိပါသလား။
W: Vault ဖိုင်ကိုသော့ခတ်။ မရပါ။ များသောအားဖြင့် dpkg သို့မဟုတ်အခြား apt tool သည် package များကို install လုပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် read-mode ဖြင့်ဖွင့်လိမ့်မည်။ သင် package အတွင်းရှိအပြောင်းအလဲအားလုံး LOST ဖြစ်လိမ့်မည်။
terminal တွင်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမဆိုလုပ်ဆောင်ရန်။ မက်ဆေ့ခ်ျဆက်ရှိနေသေးပါက user session ကိုပိတ်ပြီးအသုံးပြုသူ session ကိုပြန်စရန် Operating System ကို restart လုပ်ပါ။
မှတ်ချက် ၂ - လုံခြုံရေးအရ၊ DEBIAN Multimedia Repositories သည်အလွန်စိတ်ချရလောက်သော (သို့) ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိကြောင်းသတိရပါ။ ထို့အပြင် DEBIAN 8 နှင့်ရောနှောသောအခါ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့နှင့်အစားထိုးရန်အချို့ packets များသို့မဟုတ်စာကြည့်တိုက်များကိုဖယ်ရှားရန်တောင်းဆိုသည်။ ငါကိုယ်တိုင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြproblemsနာမရှိဘူး၊ သတိပေးချက်ကသိပ်မများဘူး။
မှတ်ချက် ၂ - သင့်ရဲ့ Distro (ဖြန့်ဖြူးခြင်း) ဒေဘီယန် သို့မဟုတ်အပေါ်အခြေခံပြီး ဒေဘီယန် အထုပ်ကိုမပို့ပါဘူး«တတ်လွယ်ခြင်း»ပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းပြီးပါက၊
ငါထပ်ထည့် repositories ကအားလုံး၏သော့ကို install နှင့်အတူဆက်လက်:
မှတ်စု: အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကွန်ယက် (အတွင်းပိုင်း) မှအင်တာနက်သို့ဆက်သွယ်မှုပြproblemsနာများ (proxy) ကြောင့်ဂူဂဲလ် repository သော့ကိုမတပ်ဆင်ပါက၊ ဤသိုလှောင်ရာ၏သော့များကိုတပ်ဆင်ရန်အောက်ပါ command ကိုတိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်ပါ။
ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ဂူဂဲလ်ရဲ့ပြင်ပ repositories (ထပ်တူများသို့မဟုတ်မ) ကိုမှတ်ချက်ပေး / ပယ်ဖျက်ပါ၊ သို့မှသာ Repositories ၏ပုံတူကိုမတင်ပြနိုင်ဘူး -
နောက်တဖန် repositories မှ pack ကိုစာရင်းများကို update နှင့်အတူဆက်လက်:
ထို့နောက်ရရှိနိုင်သော packages အသစ်များအားလုံခြုံစွာ update လုပ်ပါ။
မှတ်စု: အကယ်၍ သင်သည်အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိသောနည်းပညာရှင်ဖြစ်မှသာ -
aptitude အပြည့်အဝအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း / apt-get dist-upgrade / apt full-upgrade
ကျွန်ုပ်သည် Operating System ရှိလက်ရှိအထုပ်အပိုးပြsolvingနာများကိုဆက်လက်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။
အဆင့် 3.1 စွမ်းဆောင်ရည်ထိန်းသိမ်းခြင်းထိန်းသိမ်းခြင်း
အဆင့် ၁ တိုးတက်လာသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်မွမ်းမံမှု
3.3 အဆင့် ၃.၃ စနစ်အားပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြောင်းလဲမှုအတွေ့အကြုံ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Installation လမ်းညွှန် DEBIAN 8/9 - 2016 - အပိုင်း ၁
ကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာကောင်းတယ်၊ ငါသူတို့ကိုထည့်ပြီးပရိုဂရမ်တစ်ခု install လုပ်ရင် Stretch repositories ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူး။
ထူးချွန် TUTE ။
သင်သည် DEBIAN 8 သို့မဟုတ်9ကိုအသုံးပြုပါက repositories တစ်ခုစီသည်သီးခြားစီဖြစ်သင့်သည်။ DEBIAN 8 (Stable) တွင် Stretch (Testing) ကိုသင်ထည့်လိုပါကပထမနှင့်ဒုတိယစာကြောင်းများကိုသာအကြံပြုပါသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ အမြဲတမ်း Repositories ၏နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲကိုထောက်ခံရန် Operating System ကိုအမြဲရွေးချယ်ပါ။ ခင်ဗျားကိုသာအကြံပေးလိုပါတယ်၊ ဖြစ်နိုင်မလားမှီခိုနေရတဲ့ပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့၊ install လုပ်ဖို့၊ မလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်။
ငါ apt အထုပ် update ကိုပြု။ aptitude ကျန်ရစ်လျှင်အဘယ်ကြောင့် aptitude ကိုအသုံးပြုရန်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသနည်း
သင်မှန်ပါတယ်။ ငါက aptitude နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအခြေခံကျတဲ့သုံးစွဲသူတွေကိုပိုပြီးသိတယ် (အကျွမ်းတဝင်) ။ Media နှင့် Advanced ကိုအသုံးပြုပြီး aptitude / apt-get / apt ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
Debian ကိုတပ်ဆင်ရန်ထူးခြားသောလမ်းညွှန်တစ်ခု၊ အချို့မှာ neboot အတွက်နားမလည်နိုင်သော်လည်း ငါကပိုပြီးစေ့စေ့စပ်စပ်လေ့လာသင်ယူရန်၎င်းသည်ငါ့ကို Debian ကို install လုပ်ဖို့ကူညီပေးသည်။ Debian တည်ငြိမ်မှုကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။ ပြီးတော့အတွေ့အကြုံကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ သူ၏အလုပ်အတွက်ရေးသားသူမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေးစရာရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသည့်အရာများမှာတရား ၀ င်ပါကအဘယ်ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပါ ၀ င်သော repositories ကိုပြောင်းလဲသင့်သနည်း။ ၎င်းသည် "စက်ရုံ" တွင် configure မပြုသောအကြောင်းပြချက်ကဘာလဲ?
ပရိုဂရမ်ကိုသွင်းယူပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော့်မှာမနှစ်မြို့ဖွယ်ပြproblemနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ အခုတော့ဒါကိုမွမ်းမံထားတယ်၊ ပြproblemနာတခုခုကိုမတပ်ဆင်နိုင်ဘူး၊ ငါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟုသုတသိပ်မများပေမယ့်တဆင့်ပြီးတဆင့်သွားတဲ့အမှားဟာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ်။ အစီရင်ခံစာတွင်“ Http://200.11.148.219/seguridad/dists/jessie/updates/InRelease” တွင်တွေ့ရသည့်အရာများမှာဤတွင်ပါရှိသည်။ +++ mintUpdate စတင်ခြင်းအစီရင်ခံစာ
++ Auto-Refresh timer သည် ၁၅ မိနစ်၊ ၀ နာရီ၊ ၀ ရက်အတွင်းအိပ်စက်သည်
++ Refresh ပြီးစီးပါပြီ
++ MintUpdate သည် auto-refresh လုပ်၍ tray mode တွင်ရှိနေသည်
- checkAPT.py အမှားသည်အသစ်ပြောင်းခြင်းစာရင်းကိုမပြုပြင်နိုင်ပါ
- checkAPT.py အမှား၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းစာရင်းကိုမပြုပြင်နိုင်ပါ»
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် EL လမလန်း
ဤရွေ့ကား DEBIAN များအတွက်လက်ရှိ repositories ကိုဖြစ်ကြသည်။
# တရားဝင် LINUX DEBIAN 8 (JESSIE) အဖွဲ့များ #
# အခြေစိုက်စခန်း repository ကို
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ အခမဲ့ Jessie အဓိကပံ့ပိုးမှု
deb http://security.debian.org/ jessie / မွမ်းမံအဓိကပံ့ပိုးမှုများကိုမွမ်းမံသည်
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-updates တွေကိုအဓိကပံ့ပိုးမှုမရှိသည်
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie- အဆိုပြုထား - မွမ်းမံမှုများအဓိကပံ့ပိုးသည်မဟုတ်
# တည်ငြိမ်သောအခြေစိုက်စခန်းအတွက် Retro-adaptations
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-backports အဓိကပံ့ပိုးမှု Non- အခမဲ့
တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ Multimedia Updates များ
# deb http://www.deb-multimedia.org Jessie အဓိကမဟုတ်သော
တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ Multimedia Repository Key
၎င်းတို့ကိုသင်၏ရင်းမြစ်များစာရင်းတွင်အစားထိုးပြီးနောက်၎င်းလုပ်ဆောင်ပုံကိုကြည့်ရှုရန်အောက်ပါ command line များကို run ပါ။
apt update; sudo update-apt-xapian-index; sudo aptitude လုံခြုံစွာအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ sudo apt ထည့်သွင်းထားသည်။ sudo dpkg -configure -a; sudo apt-get autoremove; sudo apt –fix- ပျက်စီးခြင်းကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်
localepurge; sudo update-grub; sudo update-grub2; စင်ဒို Sudo ကျွမ်းကျင်မှု; sudo aptitude autoclean; sudo apt-get autoremove; sudo apt autoremove; sudo apt ရှင်းလင်းခြင်း၊ sudo apt ဖယ်ရှားပါ
sudo rm -f /var/log/*.old /var/log/*.gz / var / log / apt / * / var / log / auth * / var / log / daemon * / var / log / debug * / var / log / dmesg * / var / log / dpkg * / var / log / kern * / var / log / မက်ဆေ့ခ်ျ * / var / log / syslog * / var / log / user * / var / log / Xorg * / var / crash / *
Installation လမ်းညွှန် DEBIAN 8/9 - 2016 - အပိုင်း ၂
သင်၏ browser သည် Panopticlick နှင့်မည်မျှလုံခြုံသည်ကိုရှာဖွေပါ။